Laba kursi oo Harti-Abgaal ay isku hayaan oo laga tegay xilli la shaaciyey doorashada kuraasta taalla JOWHAR | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Laba kursi oo Harti-Abgaal ay isku hayaan oo laga tegay xilli la...
Laba kursi oo Harti-Abgaal ay isku hayaan oo laga tegay xilli la shaaciyey doorashada kuraasta taalla JOWHAR
Jowhar (Dalkaan.com) – Guddiga doorashada HirShabeella ayaa shaaciyey 11 kursi oo ka mid ah Golaha Shacabka oo uu dhowaan doorashadoodu ku qabanayo magaalada Jowhar ee xarunta maamulkaas.
HOP146 ayaa la rumeysan yahay inuu Cabdullaahi Maxamed Nuur uga tanaasulay Madaxweyihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed, oo la sheegay in beeshu kursigan siisay.
Labadan kursi ayaa waxa uu ka dhaxeeyaa Beesha Suul Harti, laakiin waxaa ku fadhiya laba xildhibaan oo isku jufo hoose ah, taasi oo cabasho xooggan ay ka qabaan jufooyinka kale ee kursigan wax kale.
Xiisadda ka taagan arrintan ayaan weli xal laga gaarin, waana taas sababta dib loogu dhigay doorashada kuraastan.
Jufooyinka ka cabanaya in labada kursi ee HOP141 iyo HOP146 ay qaadatay hal jufo ayaa wacad ku maray inaysan ka tanaasuli doonin, waxayna ka digeen dagaal ka dhaca Jowhar haddii aan xuquuqdooda lasiin.
Afar qodob oo sabab u ah inuu Farmaajo wali kusii dhaganaado...
Frenkie de Jong oo Diiday inuu u Dhaqaaqo Manchester United?
Maxkamadda G/Banaadir oo laga dalbaday inay soo xirto ganacsato lagu eedeeyey...
Real Madrid oo noqotay kooxdii ugu dambeysay ee ku biirta tartanka...
‘HOGAAMIYE ARAGTI , HUFNAAN IYO KARTI LEH’ (QAYBTII 1AAD)
Deg deg Ragii Aflagaadeeyay RW Rooble oo Raadinaya in ay la...
LAGOOYE oo u gacan galay dowladda iyo arrin uu shaaciyay